Haddii diidmo lagaa siiyo arjigaaga codsiga sharciga deggenaanshaha adigoo jooga wadanka Iswiidhan - Migrationsverket
/ Qofka aan caddeynkarin aqoonsigiisa
/ Go’aanka sharciga deggenaanshaha
/ Haddii diidmo lagaa siiyo arjigaaga codsiga sharciga deggenaanshaha adigoo jooga wadanka Iswiidhan
Haddii diidmo lagaa siiyo arjigaaga codsiga sharciga deggenaanshaha adigoo jooga wadanka Iswiidhan
Om du får avslag på din ansökan om uppehållstillstånd och befinner dig i Sverige – somaliska
Haddii ay Hey’adda laanta socdaalku diidmo kaasiiyo codsigaaga ku saabsan sharciga deggenaanshaha wadanka, taas manahedu waa in aanad adigu xaq u lahayn sharciga deggenaanshaha wadanka Iswiidhan waxaanad ku khasab tahay inaad wadanka ka baxdo. Waxaad markaa kala doorankartaa inaad go’aanka oggolaato iyo in aad rafcaan ka qaadato. Haddii aad rafcaan ka qaadato waxaad Iswiidhan joogikartaa inta ama wakhtiga ay arrintaada maxkamadi eegeyso. Xitaa haddii aad go’aansatay inaad arrinta rafcaan ka qaadatid waa inaad ku tallo gashaa sidii aad wadankaagii dib ugu laaban tahayd ama wadanka aad xaqa u leedahay inaad joogikarto.
Haddii aad oggolaato go’aanka markaa waa inaad saxiixdo in aad ku qanacsan tahay. Haddii aad saxiixdo markaa rafcaan kama qaadankartid waxaanad ku khasab tahay inaad qorshayso socdaalkii wadankaaga aad ku tegilahayd.
Qorshaydo safarka wadankaaga
Adiga ayaa ka mas’uul ah sidii aad u qorshayn lahayd socdaalkaaga, inaad diyaarsato baasaboorka iyo waxyaabaha kale ee aad u baahan tahay si aad wadankaagii dib ugu laabato ama wadanka kale ee aad xaqa u leedahay inaad deggenaato. Haddii aad hayso wax su’aalo ah ama aanad helin caddeyntii aad ku dhoofi lahayd ee guriga aad deggen tahay cinwaankiisa laguugu soo diray waxaad markaa la xiriiraysaa qaybta dadka lagu qaabilo ee adiga kuugu dhow.
Ka akhri caddeynta lagu dhoofo meesha cinawaanka ee dhoofitaan
Hey’adda laanta socdaalku waxay kuu soo diraysaa go’aanka
Marka ay Hey’adda laanta socdaalku kuu soo dirayso go’aanka waxay isticmaalidoontaa warbixinta la fududeeyey (förenklad delgivning). Sidan soo socota ayey noqoneysaa:
Hey’adda laanta socdaalku waxay go’aanka kuugu soo diraysaa cinwaanka aad sheegatahay ee aad tiri waa laygala soo xiriiri karaa. Haddii aad wadanka Iswiidhan ka diiwaangashan tahay waxay markaa Hey’adda laanta socdaalku go’aanka kuugu soo diraysaa cinwaanka aad ku diiwaan gashan tahay. Ugu yaraan maalin kadib ayey Hey’adda laanta socdaalku kuu soo diraysaa fariin kaantarool ah oo ku saabsan in go’aankii laguu soo diray. Sidaas waxa loo sameeyaa in la hubiyo inaad heshay warqaddii koowaad. Laba waraaqood ayaad ka heleysaa Hey’adda laanta socdaalka, inta badan waxa u dhaxaysa hal maalin. Adigu uma baahnid inaad Hey’adda u soo sheegto inaad warqadda heshay.
Waxa loo arkaa in adiga lagu wargeliyey go’aankii marka laba asbuuc laga soo wareego warqaddii laguu soo diray. Wixii intaa ka dambeeya waxaad haysataa sadex usbuuc oo aad go’aanka rafcaan kaga qaadatid. Haddii aanad helin go’aankii laguu soo diray ee aad heshay fariintii kaantaroolka oo keliya waxaad markaa la soo xiriiraysaa Hey’adda laanta socdaalka sida ugu dhakhsaha badan.
Ka feker in aad si joogto ah kaantarool ugu samayso oo aad magacaaga ku qorto albaabka aad deggen tahay ama sanduuqa boosta. Haddii aad go’aanka lagaa gaaray rafcaan ka qaadato maxkamada maamulku (maxkamadu) waxay go’aanka kugu wargelinaysaa warbixinta la fududeeyey (förenklad delgivning).
Marmarka qaarkood go’aanka afka ayaa lagaaga sheegayaa. Hey’adda laanta socdaalku waxay markaa kuu soo diraysaa warqad ay kuugu yeerayso oo uu wakhti ku qoran yahay si aad annaga noogu timaado oo go’aanka lagaa gaaray laguugu sheego.
Rafcaan ka qaadashada ku saabsa sharciga deggenaanshaha
Haddii aanad go’aankii lagaa gaaray ka qaadan rafcaan markaa waxa bilaabmaya inuu go’aankii hirgalo muddo sadex usbuuc ah kadib marka aad hesho go’aanka. Waxaad kaloo samaynkartaa inaad oggolaato go’aanka adiga oo saxiixaya oo ku qanacsan. Marka aad saxiixdo markaa wixii ka dambeeya racfaan kama qaadankartid waxaanad u diraaygaroobaysaa inaad wadanka ka baxdo.
Haddii aanad oggolaanin go’aanka waxaad xaq u leedahay inaad racfaan ka qaadatid. Warqadda rafcaanka waxaad u soo diraysaa Hey’adda laanta socdaalka. Marka hore Hey’adda laanta socdaalka ayaa warqadaada rafcaanka eegaysa bal inay iyagu wax ka bedelikaraan go’aanka. Haddii ay markaa u arkaan in aanay jirin sabab ay go’aankii ay gaareen aanay waxba uga bedeleyn waxay markaa u sii dirayaan maxkamada hey’adda laanta socdaalka (migrationsdomstolen). Maxkamadu waxay samaynkartaan inay bedelaan go’aankii hore loo gaaray ama ay ku raacaan go’aankii ay Hey’adda laanta socdaalku gaartay. Warqadaada rafcaanku waa inay hey’adda soo gaarto inta aanu dhicin wakhtigii go’aanka loogu talagalay, waana sadex usbuuc marka laga soo bilaabo maalintii ugu horeysay ee go’aanka lagu wargeliyey. Haddii aad heshey go’aan masaafuris ah wadanka waad joogikartaa ilaa iyo inta dacwadaada ama rafcaankaaga la eegayo. Laakiin haddii aad haysato go’aan ku saabsan celin (avvisning) kaas oo sida ugu dhakhsaha badan lagu suurtogelinayo waxaad markaa ku khasban tahay inaad wadanka ka baxdo xitaa haddii aad go’aankii racfaan ka qaadatay.
Akhri warbixint intaa dheer sida rafcaanka looga qaato
Akhri warbixin intaa dheer sida celinta degdega ah loo fuliyo
Haddii aanad go’aanka raacin
Marka uu go’aanku wakhtigiisii dhammaaday ee aan rafcaan laga qaadankarin (go’aankii uu hirgalo) waa inaad markaa wadanka ka baxdo. Go’aankaaga diidmada waxa ku yaala ilaa iyo inta aad wakhti haysato marka aad wadanka Iswiidhan ka baxaysid.
Haddii aanad wadanka kaga bixin wakhtiga ku qoran go’aanka laguu soo diray markaa Hey’adda laanta socdaalku waxay gaaraysaa go’aan ku saabsan in dib lagaaga mamnuuco inaad markale dib wadanka ugu soo noqoto. Waxa kale oo go’aan laga gaarayaa in indhaha lagugu hayo ama meel lagugu xiro. Indha oo lagugu hayaa macnaheedu waxa weeye in aad iska soo xaadiriso oo aad u timaado Hey’adda laanta socdaalka ama booliiska wakhtiyada qaarkood. Haddii lagu siiyo go’aan ku saabsan in meel lagugu xiro waxaad deggenaanaysaa guri xiran ilaa iyo inta aad sugayo bixitaankaaga.
Haddii ay Hey’adda laanta socdaalku qiimeyso in aanad rabin inaad wadanka uga baxdo si xornimo leh oo markaa loo baahdo in wadanka khasab lagaaga masaafuriyo, markaa mas’uuliyada waxa lagu wareejinayaa booliiska si ay arrinta u fuliyaan.
Akhri warbixin intaa dheer oo ku saaabsan haddii aanad adigu go’aanka raacin waxa dhacaya
Adiga ayey markwalba ku saaran tahay mas’uuliyada ku saabsan inaad tusto Hey’adda laanta socdaalka inaad wadanka ka baxayso. Haddii aanad caddeynin inaad dhoofayso marka Hey’adda laanta socdaalku waxay gaarikartaa go’aan ku saabsan inay kaa mamnuucaan inaad dib markale ugu soo noqoto wadamada laysku yiraahdo (Schengenområdet) marka wakhtigii loogu talagalay celinta ama masaafurisku uu dhamaado. Waxa arrintaada loo gudbinayaa booliiska xuduudka ilaaliya.
Si ay Hey’adda laanta socdaalku u oggaato inaad wadanka Iswiidhan ka baxday waxa marka aad dhoofayso u dhiibaysaa qolada kaantaroolka baasaboorada warqad caddeyn ah oo inaad dhooftay sheegaysa (utresebevis). Warqadda caddeynta dhoofitaanka boosta ayaa laguugu soo dirayaa ama haddii kale waxaad ka codsanaysaa qaybta ku qaabilsan ee adiga kuugu dhow. U fiirso ma gadankartid tigid aad siimarikarto wadan ku yaala wadamada (Schengenland) si aad caddeyntii dhoofitaanka halkaa u geyso.
Waxaad kaloo ku soo caddeynkartaa inaad wadanka ka baxday adiga oo Hey’adda laanta socdlaaka u soo diraya baasaboorkaaga koobigiisa bogga koowaad ee ay ku qoran yihiin macluumaadkaagu iyo bogga ugu dambeeya oo lagu dhuftay shaamada in aad wadanka ka baxday (lambar ayaa ku yaala). Tigidka diyaarada iyo boodhin baasku oo keliya ahi kuma filna inaad ku soo caddeyso dhoofitaankaaga. Arrintaasi way khuseysaa haddii uu go’aanka lagu siiyey yahay mid celin ama masaafuris ah
Waxaad ka heleysaa macluumaadka Hey’adda laanta socdaalka (Bogga af-ingiriisiga)
Mamnuucid inaad dib u soo laabato
Haddii aanad wadanka ka bixin wakhtiga ku qoran go’aanka laguu soo diray waxa markaa lagaa mamnuucikaraa inaad dib ugu soo laabato mid ka mid ah wadamada laysku yiraahdo (Schengenländerna) muddo wakhti cayiman ah. Waxa kale oo xitaa lagaa mamnuucidoonaa inaad dib u soo laabato haddii ay Hey’adda laanta socdaalku u aragto in aanad rabin inaad si madaxbanaan oo xor ah u laabatid.
Haddii lagu siiyey go’aan ku saabsan celin taas oo sida ugu dhakhsaha badan lagugu celinayo waxaad markaa marwalba haysataa go’aan ah in lagaa mamnuucay inaad markale dib u soo laabato.
Marka aad wadanka Isiidhan ka baxdo, haddii aad rabto, waxaad markale dib u codsankartaa sharciga deggenaanshaha. Haddii aad haysato sabab macquul ah waxa laguu oggolaanayaa sharciga deggenaanshaha markaa go’aankii masaafuriska ahaa iyo mamnuucidii lagaa mamnuucay inaad soo noqonin meesha waa laga saarayaa.
Akhri warbixin dheeraad ah oo ku saabsan mamnuucida dib u soo noqoshada iyo waxa aad samanayso si aanad arrintssa u u samayn
Akhri warbixin dheeraad ah oo ku saabsan celinta sida deg dega ah loo fulinayo
Kaarka oggolaanshaha daganaanshaha